Ucwaningo olusha luhlola umthelela we-Roundup herbicide kuzinyosi zezinyosi - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Ucwaningo olusha luhlola umthelela we-Roundup herbicide kuma-honeybees
Posted on January 25, 2021 by UCarey Gillam
Iqembu labacwaningi baseChina lithole ubufakazi bokuthi imikhiqizo ye-glyphosate-based herbicide iyingozi kuma-honeybees noma ngaphansi kokunconywa okunconywayo.
Ephepheni elishicilelwe ku iphephabhuku online Imibiko yeSayensi, Abaphenyi abasebenzisana neChinese Academy of Agricultural Sciences eBeijing kanye neChinese Bureau of Landscape and Forestry, bathe bathole imithelela eminingi engemihle kuzinyosi lapho bebeka izinyosi kuRoundup - a glyphosateumkhiqizo osuselwe kuthengiswa ngumnikazi weMonsanto uBayer AG.
Ukukhunjulwa kwezinyosi zezinyosi "kwakuphazamiseke kakhulu ngemuva kokuchayeka kuRoundup" kusikisela ukuthi ukuvezwa kwezinyosi ezingapheli emakhemikhali okubulala ukhula "kungaba nomthelela omubi ekuseshweni nasekuqoqweni kwezinsizakusebenza nasekuhlanganiseni imisebenzi yokudla" yizinyosi, abacwaningi bathi .
Futhi, "amandla okukhuphuka wezinyosi zezinyosi anciphe kakhulu ngemuva kokwelashwa ngokuhlungwa okunconyiwe kweRoundup," abacwaningi bathola.
Abaphenyi bathi kunesidingo “sohlelo lokuxwayisa nge-herbicide olunokwethenjelwa” ezindaweni zasemakhaya eChina ngoba abafuyi bezinyosi kulezo zindawo “ngokuvamile abaziswa ngaphambi kokuba kufuthwe amakhambi okubulala ukhula” futhi “kwenzeka izehlakalo ezinobuthi njalo zezinyosi zezinyosi”.
Ukukhiqizwa kwezitshalo eziningi ezibalulekile zokudla kuncike kuzinyosi zezinyosi nezinyosi zasendle ukuze kuthunyelwe impova, futhi ukwehla okuphawuliwe kubantu bezinyosi baphakamise ukukhathazeka emhlabeni jikelele mayelana nokutholakala kokudla.
Iphepha elivela eRutgers University eshicilelwe ehlobo eledlule uxwayise ngokuthi "isivuno sezithelo sama-aphula, ama-cherry kanye namajikijolo kulo lonke elase-United States sincishiswa ukungabi khona kwezipolishi."
izibulala-zinambuzane Bayer, izinyosi, China, Chinese, imvelo, EPA, glyphosate, zezempilo, ukhula, izinyosi, Monsanto, Nature, izibulala-zinambuzane, ubuthi, nabalawuli, ucwaningo, RoundUp, isayensi, Imibiko yeSayensi
Izinhlelo zeGates Foundation zokwenza kabusha izinhlelo zokudla zizolimaza isimo sezulu
Ukuhlolwa kwe-EPA kwamakhemikhali kudonsa ukugxekwa kososayensi bayo
Olunye ucwaningo lwe-Roundup luthola izixhumanisi ezingaba nezinkinga zempilo yabantu
Isitshalo esonakalisa i-pesticide sivaliwe; Bona imibhalo yokulawula yeNebraska ephathelene nezinkinga ze-AltEn neonicotinoid
Ucwaningo olusha luthola izinguquko ezihlobene ne-glyphosate ku-gut microbiome